Fil d'actualités du 18/03/2018
18/03/2018 - 19:00 : BAOLINA KITRA: Nandavo 1-0 ny Sportive Port Louis 2000 avy atsy Maorisy ny Fosa Juniors tany Mahajanga androany, raha toa ka efa nandresy 2-0 tamin'ny lalao mandroso. Tafaiakatra amin'ny dingana 1/8-dàlana amin'ny fiadiana ny amboaran'ny CAF ny Fosa Juniors.
Archive du 20170728
Fanodinkodinam-bola Nohadihadiana i Elysé Ratsiraka
Ora efatra no lanin’ireo polisy avy amin’ny kaomisaria misahana ny heloka ara-bola Toamasina, nanaovana ny fakana am-bavany an’ny ben’ny tanàna tao amin’ny lapan’ny tanànan’i Toamasina omaly.
Ravalo sy ny TIM Tsy hahita rariny amin’ny fanjakana
Nolavina ny fangatahan’ny Antoko Tiako I Madagasikara hanatanteraka ny fanamarihana ny faha-15 taonany eny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 29 jolay izao.
Fotoana izao handraisan’ny filoham-pirenena sy ny rehetra fanapahan-kevitra hentitra hitsinjovana ny hoavin’ny taranaka faramandimby, hoy ny filohan’ny Tamami, Floriot Samihary, nandritry ny antso avo nataony omaly tetsy Anosy.
Lalatiana Ravololomanana Efa miteniteny foana sisa
Tsy vaovao amin’ny sofina intsony ny mahita sy mandre mpanao politika be fialonana manenjika ny Antoko Tiako I Madagasikara sy i Marc Ravalomanana.
Fisaonam-pirenena Niteraka adihevitra goavana
Miteraka resabe eny anivon’ny fiarahamonina ny resaka fisaonam-pirenena nialoha sy taorian’ny nanokanana omaly alakamisy 27 jolay ho andro maloka ho an’ny firenena Malagasy
Apostoly Marc Tatandraza Tsy hanao politika mandrakizay aho
Taorian’ny nanaovan’ny Apostoly Marc Tatandraza fanambarana goavam-be fa tsy maintsy handeha hody any amin’ny Ray izy dia betsaka ny resaka nandeha momba azy.
Hazo avo halan-drivotra !
Tanteraka tokoa ny fomba fiteny hoe ny hazo avo halan-drivotra, ary misongadina izany eo amin’ny tontolo politika, raha dinihina ny fanenjehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
“Vacation” an’ny mpampianatra Tsy maintsy haloa, hoy i Paul Rabary
Betsaka ireo mpampianatra mitaraina ny amin’ny tsy mbola naharaisan’izy ireo ny “vacation” ny hatreto.
Androhibe Analamahitsy Nidoboka am-ponja ilay nangalatra tao amin-dry Mompera
Nalefa eny am-ponja vonjimaika omaly rehefa avy nalaina am-bavany ilay lehilahy iray 42 taona voasambotry ny polisy avy ao amin’ny Boriborintany fahavalo etsy Analamahitsy ny fiandohan’ny herinandro teo.
Ambohitrantenaina Imerintsiatosika Hanatanteraka didimpoitra faobe ny miaramila
Hanatanteraka didimpoitra faobe ao amin’ny tanànan’Ambohitrantenaina Imerintsiatosika izay misy ny anjara tanin’izy ireo ny miaramila mivondrona ao amin’ny Service civique.
Carolie Gevers- Banky iraisampirenena Tena mahantra ny Malagasy
Miisa valo ireo singa nalaina tamin’ny PND (PaikadyNataoDinasa) hisitraka tohana ara-teknika sy ara-bola avy amin’ny Banky iraisampirenena voarafitra ao anatin’ny CPP (Cadre de Partenariat Pays) amin’iMadagasikara, hoy ny tale misahanaan’i Madagasikara Coralie Gevers.
Ambohitrimanjaka Nodorana ireo rongony 400 kg tratra
Notanterahan’ny polisy misahana ny ady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina etsy Anosy omaly, tamin’ny 11 ora maraina teny Ambohitrimanjaka